Amaqela TWT R & D
TWT uye abaphezulu technical amaqela ezigqwesileyo R & D, baxhotyiswa kunye phambili izixhobo ngqo R & kwiziko D kunye neziko test, ngaphezu kwama-50 iminyaka zobugcisa ezingasetyenziswanga, R & D kunye mveliso umgangatho ophezulu, okonga umbane kunye ukhuselo lokusingqongileyo iimveliso ophezulu zobugcisa R & D standard TWT yenkampani. Uphuhliso TWT kunye nokuveliswa kwemveliso luyazigwagwisa amalungelo abenzi ngaphezu ne-20 kunye abaninzi yamabhaso wesizwe, kwaye ke owaseka Ministry of kushishino oomatshini standard imveliso vana.
LoMxokelelwano yoBulunga TWT and Quality Assurance
Sibona iimveliso nokhuseleko kunye nomgangatho luthembeke umphefumlo i-Enterprise kaThixo; kushishino vana China, owokuqala ukufumana ISO 9001 neziqinisekiso ezikhutshwe yi DNV thina: 2008 Quality System Certification; kwaye sifika nayo EU Pressure Izixhobo Directive 97/23 / EC (CE certification) kunye nesiqinisekiso mveliso yi CC.
Sihlala kokwenza ekuqeqesheni abasebenzi yobugcisa ukuqinisekisa ukuba kubathengi kunandipha iinkonzo ngeyona ndlela Industry. iingcali kwiinkonzo zethu amava atyebileyo kufakelo, ukulungiswa kunye nokugcinwa; kunye neemveliso zibe ne-inventri abaza kuzisebenzisa. Siyakuqinisekisa ukuba sikwazi ukuqhagamshelana nawe, ndikunike uphendule kwisithuba seeyure ezingama-48 emva kokuba efumene izikhalazo umgangatho okanye isicelo inkxaso yobugcisa evela abathengi na indawo ehlabathini. Wena unokukholwa kakuhle, apha, unako iinkonzo nanto ezikumgangatho ophezulu oyithandayo.
"Ukholo, Umgangatho kunye Innovation" ezi ixabiso engundoqo TWT Company
Le nkqubo ixabiso sisiseko izimvo yeNkampani kunye neenkcubeko,
kanye njengoko efanayo xa yaqala TWT ngo-1956.